Iindaba - Amatyala e-US COVID-19 adlula i-25 mln-iYunivesithi yaseJohn Hopkins
U-Allyson Black, umongikazi obhalisiweyo, ukhathalela abaguli be-COVID-19 kwi-ICU (ICandelo loKhathalelo olunzulu) e-Harbour-UCLA Medical Centre eTorrance, California, US, ngoJan 21, 2021. [Ifoto / Ii-arhente]
ENTSHA-Inani elipheleleyo lamatyala e-COVID-19 e-United States agqibe i-25 yezigidi ngeCawa, ngokwe-Centre for Systems Science and Engineering kwiYunivesithi yaseJohn Hopkins.
Amanani amatyala e-US COVID-19 anyuke aya kwi-25,003,695, nenani elipheleleyo lokufa kwabantu abangama-417,538, ukusukela nge-10: 22 kusasa ngexesha lasekhaya (1522 GMT), ngokwe-CSSE tally.
ICalifornia ibike elona nani likhulu lamatyala phakathi kwamazwe, emi kwi-3,147,735. I-Texas iqinisekisile amatyala angama-2,243,009, alandelwa yiFlorida ngamatyala ayi-1,639,914, eNew York ngamatyala ayi-1,323,312, nase-Illinois ngaphezulu kwamatyala asisigidi.
Amanye amazwe anamatyala angaphezu kwama-600,000 abandakanya iGeorgia, iOhio, iPennsylvania, iArizona, iNorth Carolina, iTennessee, iNew Jersey neIndiana, idatha ye-CSSE ibonakalisile.
I-United States ihlala ililizwe elihlaselwe kabuhlungu ngulo bhubhane, uninzi lweziganeko nokufa kwabantu emhlabeni, zenza ngaphezulu kweepesenti ezingama-25 zokutshutshiswa komhlaba kunye neepesenti ezingama-20 zabantu abaswelekileyo kwihlabathi liphela.
Amatyala e-US COVID-19 afikelele kwizigidi ezili-10 nge-9 kaNovemba ngo-2020, kwaye inani liphindwe kabini nge-1 kaJanuwari, ngo-2021. Ukusukela ekuqaleni kuka-2021, ityala laseMelika lenyuke ngezigidi ezi-5 ngeentsuku nje ezingama-23.
Amaziko aseMelika oLawulo lweNtsholongwane kunye noThintelo axele ngamatyala ali-195 abangelwa ngumahluko ongaphaya kwamashumi amabini ukusuka ngoLwesihlanu. I-arhente yalumkisa amatyala achongiweyo akameli inani elipheleleyo lamatyala anxulumene nokwahluka okunokujikeleza eMelika.
Uqikelelo lwesizwe oluhlanganisiweyo oluhlaziywe ngoLwesithathu yi-CDC luqikelele inani lama-465,000 ukuya kuma-508,000 ukusweleka kwe-coronavirus e-United States ngo-Feb 13.